Kungani kumele ngife uma uNkulunkulu engakangibizi? – Mugabe | News24
Kungani kumele ngife uma uNkulunkulu engakangibizi? – Mugabe
Cape Town – UMengameli waseZimbabwe, uRobert Mugabe, usegxeke abanye babaholi abaphezulu eqenjini lakhe, iZanu PF, ngokumfisela ukuthi afe, engeza nangokuthi abanye baze bazame “nokumthakatha” ukuze bezokwazi ukuthatha isikhundla sakhe.
Ngokombiko weThe Standard, uMugabe ukusho lokhu ngesikhathi ethula inkulumo emcimbini obuthanyelwe abamele labo ababebambe impi eZimbabwe, ababeboshiwe, abafelokazi bamaqhawe omzabalazo, kanye nabanye eCity Sports Centre, eHarare, ngempelasonto.
OLUNYE UDABA: Vele sengiwumengameli, kusho uNkosikazi kaMugabe – umbiko
“Ngiyazi ukuthi kunalabo abahleli phansi nabaxoxa ngokungena esikhundleni sami… Abajabule ngokuthi angifi, bazibuza ukuthi kodwa kungani engafi. Kungani kumele ngife, uma ngabe uNkulunku engakangibizi?,” uMugabe ucashunwe esho kanjalo.
Lo makadebona womholi usole izimbangi zakhe ngaphakathi eqenjini ngokuzama “ukumthakatha ukuze bathathe izintambo”, kusho umbiko we-BBC.
Lo mbiko uqhuba uthi ulokhu ukhule njalo umbango ngaphakathi kweZanu PF ngozongena ezicathulweni zalo mholi oneminyaka engu-92 ubudala, ikakhulukazi njengoba isimo sakhe sempilo silokhu “siya ngokuba sibi”.
Kuzokhumbuleka ukuthi ngoMsombuluko uMugabe udalule ukuthi uzothatha umhlalaphansi njengoba leliya lizwe libhekene nokuntenga kwesimo somnotho.
Kodwa-ke uthi uma ngabe ethatha umhlalaphansi uzowuthatha “ngendlela efanele”, nokuyisitatimende okungakacaci ukuthi ubeqonde ukuthini ngaso.